अनुसन्धानले देखाउँदछ कि नेदरल्याण्ड्समा bank०% दिवालियापनहरू भुक्तान गरिएको इनभ्वाइसहरूको कारणले भएको हो। के तपाईंको कम्पनीमा ग्राहक छ जसले अझै भुक्तान गरेन? वा तपाइँ एक निजी व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाइँसँग debणी छ जो अझै तपाइँको moneyणी छ? त्यसपछि सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More collectionण स lawyers्कलन वकीलहरू।
प्रत्येक संग्रह प्रक्रियाको लागि, धेरै चरणहरू लिनुपर्दछ। पहिलो चरण भनेको torणीलाई सूचित गर्नु हो कि उसले आफ्नो भुक्तानी दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। यो किनभने तपाईंले उसलाई कुनै अधिक लागत बिना उचित अवधिमा भुक्तान गर्ने अवसर दिनुपर्दछ। तपाईंले effectणीलाई यस प्रभावको लागि लिखित अनुस्मारक पठाउनु पर्छ। यस अनुस्मारकलाई पूर्वनिर्धारित सूचना भनिएको छ। चौध दिनको अवधि सामान्यतया एक उचित अवधि मानिन्छ जहाँ .णदाताले दावी तिर्न अनुरोध गर्दछ। अवश्य पनि, Law & Moreवकिलहरु को लागी तपाइँ को लागी डिफ़ॉल्ट को लागी एक सूचना को लागी लिन सक्नुहुन्छ।
यदि दयनीय चरण theणी द्वारा एक भुक्तानी वा भुक्तानी व्यवस्था संग समाप्त गर्न सकिदैन, कानूनी कार्यवाही शुरू गर्न सकिन्छ। मैत्रीपूर्ण स्टेप छोड्न र तुरून्त कानुनी कार्यवाही सुरू गर्न पनि सम्भव छ। कानूनी चरणमा, हामी अदालत समक्ष बकाया रकम र स costs्कलन लागतहरूको भुक्तानी दाबी गर्दछौं। कानूनी कार्यवाही सुरु हुनु अघि, theणीको सम्पत्ति जफत गर्न सम्भव छ। यसलाई कन्जर्वेटरी दौरा भनिन्छ। पूर्वाग्रह एट्याचमेन्ट यो सुनिश्चित गर्नु हो कि अदालतले निर्णय गर्नु अघि torणदाता सम्पत्ति सार्न असमर्थ छन्, ताकि तपाईं वास्तवमा देनदारबाट तपाईंको लागतहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि न्यायाधीशले तपाइँको दावी तोक्छ भने, एहतियता एट्याचमेन्ट लागूको लागी लगाउन सकिन्छ। यसको मतलब यो छ कि संलग्न सम्पत्तिहरू बेलीफद्वारा सार्वजनिक रूपमा बेच्न सकिन्छ यदि torणीले अझै भुक्तान गरिरहेको छैन। यी सम्पत्तिहरूको आम्दानी तपाईंको दावी भुक्तान गर्न प्रयोग हुनेछ। Law & Moreगरेको collectionण स lawyers्कलन वकिलहरूले एट्याचमेन्ट कानूनको क्षेत्र मा अनुभव छ र कानूनी प्रक्रिया को समयमा तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्।